နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖန်လုံအိမ် > ဖန်လုံအိမ်ရုပ်ရှင် > တရုတ်ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်
တရုတ်ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်ကိုလည်းပလပ်စတစ်ဖန်လုံအိမ်ဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ ဖန်လုံအိမ်ဘောင်သည်သံမဏိကိုယ်ထည်၊ ဝါးနှင့်သစ်သားသို့မဟုတ်ဘိလပ်မြေအစရှိသဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်သည်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ဥပမာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ ပန်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
တရုတ်ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်၏ 2.Product Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
တရုတ်ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်ကျယ်ပြန့်လျှောက်လွှာခရမ်းချဉ်သီးဆလတ်ကဲ့သို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစိုက်ပျိုးခြင်း၊ စတော်ဘယ်ရီကဲ့သို့အသီးများ၊ ငါးမွေးမြူခြင်းနှင့်အခြားအရာများ။
တရုတ်ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်သည်ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျသည်။ ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်နိမ့်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးကုန်ကျစရိတ်နိမ့်သည်။ မြောက်ဘက်forရိယာအတွက်သင့်တော်သည်။ အပူဆုံးရှုံးမှုနှင့်လေအေးကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် Double Arch နှင့် double film ကိုထိပ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏လျှပ်ကာအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကောင်းပြီးဆောင်းတွင်းတွင်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်မှာနည်းပါးသည်။ Polycarbonate plate, float glass နှင့် film (single layer, double layer) ကိုအစွန်အဖျားဖုံးအုပ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
China film greenhouse offer all the system for climate control. We can offer and design according to local climate details and စိတ်ကြိုက် requirement, like Ventilation, Cooling, Irrigation, Growing, Shading, Heating, Circulation... systems.
Shading System of China ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်
Jianda Greenhouse ကုမ္ပဏီမှတရုတ်ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်သည်လာရောက်လည်ပတ်ရန်နှင့်စုံစမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှကြိုဆိုပါသည်။
Jianda Greenhouse လုပ်ငန်း၏အဓိကနယ်ပယ်တွင်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်၊ PC ဖန်လုံအိမ်၊ ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဖန်လုံအိမ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖန်လုံအိမ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း၊ အလင်းသံမဏိကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဥယျာဉ်၊ ပန်းခြံနှင့်အတွင်းပိုင်းဖန်လုံအိမ်၏ဒီဇိုင်း၊ အစီအစဉ်နှင့်တည်ဆောက်မှု၊ Hydroponic ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုတေသနနှင့်မြှင့်တင်ရေး; သုတေသနနှင့်မြှင့်တင်ရေးအခြားစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့်ဂေဟစနစ်။